Cuntooyinka cudurro halis ah looga badbaado ee aan inta badan la cunin | Baahin Media
Ma aha cuntada ugu quruxda badan adduunka laakiin daraasad ballaaran ayaa lagu baarayay qiyaasta macdanta fibre-ta ee aan u baahan nahay, waxaana daraasaddaas lagu helay iney ku jiraan faa’iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah.
“Caddeynta hadda arrintan loo hayo waa mid aad u weyn waxayna baddaleysaa fikirkii hore ee raashinka laga qabay, sidaas awgeedna dadku waa iney imika billaabaan iney qorshahooda ku darsadaan”, waxaa sidaas BBC-da ku yiri mid ka mid ah cilmi baareyaasha daraasadda sameeyay oo lagu magacaabo Barfasoor John Cummings.
Waxaa aad loogu yaqaannaa in aan raashin ahaan loo isticmaalin oo dadku aysan jecleyn – laakiin faa’iidooyinka caafimaad ee ku jira intaas wey ka badan yihiin.
Hase ahaatee waxay sheegeen iney tiradaas aad u yartahay marka la eego faa’iidada caafimaad ee ku jirta waxayna ku taliyeen in ilaa 30g la sii gaarsiiyo.
Image captionFibre waxay ku jirtaa miraha, khudaarta cagaaran noocyo ka mid ah rootiga, baastada iyo misirta
Maxay noqoneysaa faa’iidada?
Faa’iidooyinka kale ee laga helana waxaa ka mid ah iney yareeyaan heerarka miisaanka badan, dhiig karka iyo xeyrta jirka.
Waxaa horay u jirtay fikrad ah in fibre-ta aysan faa’iido badan lahayn gabi ahaanba – iyadoo la aaminsanaa in jirka bani’aadanka uusan awood u lahayn inuu shiido isla markaana ay isku marmarto xiidmaha caloosha.
Mindhicirrada waaweyn ayaa hoy u ah balaayiin bakteeriyo ah – fiber-ta ayaana raashin u ah.